Ny fomba amam-panao rehetra any Italia izay tokony ho fantatrao | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 24/09/2021 15:00 | kolontsaina, Italia
ny fomba amam-panao any Italia Ireo dia firenena iray izay manana faka Greco-Latina, ireo izay namolavola ny fomba amam-panao Espaniola nandritra ny taonjato maro. Noho izany dia tsy dia miavaka amin'ny antsika izy ireo, farafaharatsiny momba ny manan-danja indrindra sy ny razana.
Na izany aza, na eo aza ny efa nolazainay taminao, ny fomba amam-panao any Italia dia manana endrika mampiavaka azy ireo amin'ireo fanao mahazatra any amin'ny firenena hafa izay manana kolontsaina ihany koa. Substrate latina. Tsy misy ifandraisany, ohatra, ny fomba nentim-paharazana frantsay momba ny gastronomika (avelanay ianao eto lahatsoratra momba azy ireo) na Portiogey miaraka amin'ireo any amin'ny firenena transalpine. Noho izany, holazainay aminao ny sasany amin'ireo fomba amam-panao italianina tena hafahafa.
1 Avy amin'ny fanehoan-kevitra ka hatramin'ny lovantsofina ara-pivavahana
1.1 Expressiveness, Italiana marina
1.2 Sakafo, fombafomba eo amin'ny fomba amam-panao any Italia
1.3 Religiosity, misy italianina
1.4 Familiana, olana miandry
1.5 Akanjo, miverina amin'ny lamaody
1.6 Opera, fomba amam-panao italianina tena izy
1.7 Manohitra, manana ny toetran'ny italiana
1.8 Fomba fiteny sy fehezan-teny
Avy amin'ny fanehoan-kevitra ka hatramin'ny lovantsofina ara-pivavahana
Ny zavatra voalohany tsy maintsy holazainay aminao momba ny fomba amam-panao any Italia dia ny hilazanao aminao momba ny firenena iray izay, toa ny olon-drehetra, dia maro. Toy ny tsy itovizan'ny fomban-drazana Andalosiana amin'ireo Galisiana, ny an'ny Sisilianina dia manao toy izany koa amin'ireo Piedmontese. Na izany aza, toy ny any amin'ny firenena rehetra koa, ny substrate ara-kolontsaina iraisana dia miteraka fomba amam-panao zarain'ny Italiana rehetra. Andao hojerentsika izy ireo.
Expressiveness, Italiana marina
Expressiveness, fomba amam-panao any Italia
Ny iray amin'ireo zavatra izay hahagaga anao indrindra rehefa mandeha any Italia ianao dia ny fomba fifandraisana ny mponina ao aminy. Manomboka amin'ny farany avaratra ka hatrany amin'ireo mipetraka any amin'ny faritra atsimo indrindra dia maneho hevitra be izy ireo, ka hatramin'ny fotoana toa toa mifamaly izy ireo.
Na dia cliché aza izany, marina izany, tsy filma kilasika fotsiny io. Italiana dia maneho ny heviny amin'ny faritra rehetra amin'ny vatanao. Manao fihetsika be loatra amin'ny tanany izy ireo, miteny amin'ny feo avo ary indraindray aza miaraka amin'ny fihetsik'izy ireo amin'ny fihetsiketsehana hafa. Raha fintinina, ho an'ny transalpinos tsy fifandraisana am-bava dia mitovy na manan-danja kokoa noho ny teny.
Sakafo, fombafomba eo amin'ny fomba amam-panao any Italia
Latabatra vonona hihinana
Misy fomba amam-panao italianina maro mifandraika amin'ny tontolon'ny sakafo. Tsy maintsy atao miaraka amin'ny lovia ankafizin'ny mponina sy ny fomban-drazana izy ireo izay mety hanome anao tsy fankasitrahana raha tsy fantatrao. Hiresaka momba azy ireo izahay.
Tokony ho fantatrao fa raha mitsidika italianina ao an-tranony ianao, tsy maintsy ilaina ny sakafo. Hanolotra anao hohanina sy hosotroina foana izy. Hanasa anao hijanona hisakafo atoandro na hisakafo hariva aza izy. Afaka milaza aminao izahay fa ny sakafo dia fombafomba iray manontolo ho an'ny Italiana. Mihoatra ny famahanana, ho azy ireo izany dia fihetsika ara-tsosialy.
Mba hanatrehana sakafo any amin'ny firenena dia tsy maintsy mahafantatra zavatra vitsivitsy ianao. Raha ny mahazatra, ny zavatra voalohany ho hitanao eo ambony latabatra dia ny starterDouble. Miaraka amin'io anarana io no iantsoana ny karazana fanombohana rehetra, izay araky ny anarany dia tsy vita amin'ny paty velively. Izy ireo dia mety ho saosisy na hazan-dranomasina. Fa izy ireo dia mahazatra kokoa, ohatra, ny caponata, amboarina Sisilianina mahazatra; ny fritatta, karazan-karazan-koditra omelety; ny Afrikana, fromazy crispy mampiavaka an'i Friuli, na ny supplì Roman, izay croquette vary.
Aorian'ilay antipasto dia homena anao ny dingana voalohany ary avy eo ny faharoa. Ny iray amin'ireny dia mety ho spaghetti ary aza manapaka azy na mihinana azy amin'ny sotro. Ho an'ny Italiana dia fahafoizan-tena izany. Farany, hifarana ny sakafo il dolce. Na izany aza, ny tena fiafarana dia ny kafe, tsy azo ihodivirana any Italia ary tokony ho fantatrao koa ny zavatra sasany.
Zavatra tsy tokony hataonao, indrindra amin'ny faritra toa an'i Tuscany, dia manafatra kafe fotsiny. Hijery anao toy ny vahiny izy ireo. Mangataha a expresso machiatto na tapahina, iray ristretto na tsy misy kafe na roa na avo roa heny. Na izany aza, mahazatra kokoa ny cappuccino, izay manana ampahany mitovy kafe, ronono mafana ary sombin-dronono.
Ary farany, amin'ity fizarana lava natokana ho an'ny sakafo any Italia ity dia holazainay aminao fa, ho an'ny transalpine, ny reniny sy ny renibeny no mahandro tsara indrindra eto an-tany. Ho azy ireo, ny reny ary ny nonna mahandro tsara kokoa noho ny olon-kafa izy ireo ary tsy manontany tena mihitsy. Tsy ho an'ny inona, ho an'ny Italiana masina ny fianakaviany.
Religiosity, misy italianina
Ny toetra mampiavaka ny transalpinos dia ny fitiavam-pinoany lalina. Na eo aza ny zava-misy,, araka ny antontan'isa, ny 30% -n'ny Italiana ihany no miaiky fa Katolika manana fomban-drazana, ny fomban-drazana ara-pivavahana dia tena zava-dehibe amin'izy ireo ary tena ilaina ny hanajanao azy. Raha ny marina dia zava-dehibe ny saika ny 90% -n'ny mponina no milaza fa mino.
Tsy kisendrasendra fotsiny fa any Italia ny Vatican (eto avelanay ianao lahatsoratra momba ity firenena ity), toeran'ny fivavahana katolika. Noho izany, any amin'ny firenena transalpine dia misy mariazy sy Batisa ara-pivavahana marobe, ary koa fombafomba hafa toy ny fety sy filaharana ho fanomezam-boninahitra ny olo-masina. Ary koa, toy ny zavatra rehetra ataon'izy ireo, italiana miaina am-pitiavana ny hafanam-pinoany izy ireo.
Familiana, olana miandry
Fiara mandeha mamaky an'i Roma
Izay holazainay aminao dia mety ho toa klika ary, ankoatr'izay, ny fanatontoloana. Na izany aza, ny finoana izany dia mahavonjy ny ainao. Satria amin'ny ankapobeny, italiana dia mpamily mahatsiravina. Na, tsara kokoa ny miteny hoe tena tsy manaja ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.
Any amin'ireo tanàn-dehibe amin'ny firenena, mandingana ny jiro mena ny fiara, misongona be loatra ary samy mivezivezy amin'izay tiany. Toy ny boriborintany tena izy ny arabe. Fa ambonin'izany rehetra izany, aza miampita lakilasy satria mino ianao fa hijanona ireo fiara. Tsy nanao izany mihitsy izy ireo.
Akanjo, miverina amin'ny lamaody
Nanjary malaza ny famantarana an'i Italia amin'ny lamaody. Marina fa ny sasany amin'ireo mpamorona lehibe dia transalpine, saingy tsy dia zava-dehibe loatra ho an'ny Italiana tsotra ny miakanjo araka ny fironana farany.
Na izany aza, marina fa amin'ny ankapobeny, tena miahiahy momba ny bika aman'endriny izy ireo. Tsy ho hitanao mikorontana izy ireo na dia ao amin'ny supermarket lehibe na amin'ny gym. Tena mitandrina izy ireo amin'ny fanatrehana tsara tarehy (endrika tsara) ary ao anatin'izany, tsy ny akanjo ihany, fa ny taovolo sy ny kojakoja ilaina ihany koa.
Opera, fomba amam-panao italianina tena izy
Fanehoana an'i 'Aída' avy amin'i Verdi
Amin'ny ankapobeny, italiana dia tia mozika mahafinaritra. Ary, eo amin'ireo karazana mozika rehetra, mahaliana azy ireo ny opera. Tsy kisendrasendra izany satria teraka tao amin'ny firenena transalpine io karazana fitambarana io.
Ny famoronana voalohany azo raisina ho opera dia Daphne, ny Jacopo Peri, izay nanoratra azy tamin'ny 1537. Na izany aza, dia ho tamin'ny taonjato faha-XNUMX izany rehefa nahatratra avo indrindra ny lazany ny mpanoratra niaraka tamin'ny mpanoratra toa ny Gioachino rossini, Francesco Bellini ary ambonin'izany rehetra izany, Giuseppe Verdi.
Ity farany no tompon'andraikitra amin'ny fampalaza ny opera. Namadika ny sangan'izy ireo ho italiana mariky ny fampiraisana ny firenena ary niaraka tamin'izay dia nanjary nalaza be izy ireo. Nanomboka tamin'izay, dia fitiavam-panahy ho an'ny Italiana ihany no tsy mitovy amin'ny iray izay tsapan'izy ireo ho an'ny baolina kitra, iray amin'ireo fomba amam-panao lehibe any Italia, na dia fahita amin'ny firenena maro aza izany.
Manohitra, manana ny toetran'ny italiana
Zavatra iray hafa izay hahagaga anao raha mandeha any Italia ianao dia ny fandanian'ireo mponina ao aminy ny fotoanany amin'ny fanoherana ny zava-drehetra. Zavatra iray, ankoatr'izay, asongadin'ny toetrany mafana fo. Tsy maninona na tsia satria efa tara vao tonga ny fiara fitateram-bahoaka nandrasan'izy ireo, satria mangalatra amin'izy ireo ny Governemanta na, indrindra, satria ratsy ny ekipan'ny baolina kitra ataon'izy ireo, misy hatrany ny fitarainan'ny transalpinos.
Na izany aza dia tian'izy ireo ny manao fihetsiketsehana toa saro-piaro amin'ny taniny. Midika izany fa tsy tokony himenomenona momba an'i Italia ianao. Raha manao izany ianao dia ho lasa nasionalista indrindra eto an-tany izy ireo ary hahatonga ny fitondrantenanao ho ratsy tarehy. Izy ireo ihany no afaka mitsikera ny fireneny.
Fomba fiteny sy fehezan-teny
Izahay dia mamarana ity fitsidihana ny fomba amam-panao any Italia ity amin'ny firesahana aminao momba ny fomba fitenenana iraisan'ny firenena iray manontolo izay mitovy amin'ny andian-teny napetraka. Na dia an'ny fiteny fitenenana aza izy ireo, raha mampiasa azy ireo ianao dia ho toy ny Italiana marina.
Ohatra, quattr'occhi midika hoe maso efatra, fa ampiasaina hilazana fa olona roa no tokony hamaha ny olana iray, tsy misy olona miditra an-tsehatra. Mba handefasana olona hangina hoy izy ireo aqua any bocca. Amin'ny lafiny iray, ny fomba fiteny ligarsila mankany adika ho fatotra izany amin'ny rantsan-tànana, fa midika kosa izany fa tadidin'ny olona ny fahavoazana natao taminy hamaly faty avy eo. Raha voalaza izany cader della padella alla brace Midika izany fa mianjera avy any anaty lapoaly mankamin'ny fanendasa, fa midika izany fa lasa tamin'ny toe-javatra ratsy ianao ka lasa ratsy kokoa. Ho toy ny fandehanantsika avy any Guatemala mankany "guatepeor." Farany, raha lazain'izy ireo fa olona izany brutta come i sette peccati capitali Asehon'izy ireo fa ratsy tarehy toy ny fahotana mahafaty fito izy io, fa hitovy amin'ny orona ratsy antsika izany.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra fomba amam-panao any Italia. Raha ny lojika dia tsy azonao hadinoina fa firenena iray manontolo izy io ary samy manana ny fomban-drazany isam-paritra, fa izay rehetra noresahinay dia afaka hitanao manomboka amin'ny avaratra ka hatrany atsimo ary avy any atsinanana ka hatrany andrefana. Ary mbola namela fomba amam-panao hafa ihany isika toy ny fahazarana ampahafantaro ny olona manana ny mari-pahaizana anjerimanontolo izay hazonin'izy ireo (ohatra, mpisolovava Buscetti) na ny fitiavany ny aperitivo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Italia » Fomba amam-panao italianina